Taliyaha cusub Booliska oo sheegay Shabaab caasimadda inaysan u afduubnaan karin | Baydhabo Online
Taliyaha cusub Booliska oo sheegay Shabaab caasimadda inaysan u afduubnaan karin
Taliyaha cusub ee ciidanka Booliska Somaliya C/xakiin Daahir Saciid (Saacid) oo ka hadlaayay xaaladda ammaan ee Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu sheegay in Ururka Al Shabaab aysan u afduubnaan karin caasimadda Magaalada Muqdisho.
C/xakiin Daahir Saciid (Saacid) Taliyaha cusub ee ciidanka Booliska ayaa sheegay Al Shabaab oo ah koox yar oo Somaliya ka dagaalanta sida uu yiri inaysan u afduubnaan karin caasimadda Muqdisho oo muddooyinkaan dambe ay ku soo kordhiyeen falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka.
“Caasimadda iyo dalkaba Shabaab oo Koox yar ah uma afduubnaan karto muddo intaan ka badan umadda Somaliyed dhibaatadeeda wey soo kartay waxaana tusaale u ah Gobolo badan iyo meelo badan oo shacabka ay ka dhiidhiyeen dhibaatada ay sameynayaan, lana kaashadeen ciidamada amniga waxa ay ku guulaysteen inay falal amnidaro ka gaysan waayeen Shabaab.” Ayuu yiri Taliyaha cusub ee ciidanka Booliska.
Taliyaha ciidamada Booliska Somaliya ayaa sidoo kale sheegay inay la imaanayaan qorshooyin wax looga qabanaayo ammaanka Magaalada Muqdisho, loogana hortagaayo falalka ka dhan ka ah amnidarada ay ka gaystaan Al Shabaab.
“Waxaan la imaan doonaan qorshayaal ad adag oo shacabka aan ku hawlgelin doono anagana aan ugu adeegayno, kuna wada shaqeynayno oo aan doonayno in aan ku soo kordhino ammaanka Magaalada Muqdisho, ciidamada ammaanka nooc kasta ay yihiin habeen iyo maalin waxa ay u taagan yihiin badbaadinta shacabka Somaliyed.” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Taliyaha ciidamada Booliska.
Hadalkaan ayaa Taliyaha wuxuu ka sheegay xaflad uu shalay xilka uu kagala wareegaayay Taliyihii hore ee ciidamada Booliska Somaliyed Maxamed Sheekh Xasan Xaamud.
Falalkii amnidaro ee ugu dambeeyay waxa ay dhaceen shalay, kadib markii nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray uu isku qarxiyay xero ciidamada ay ku leeyihiin Warshadii hore ee Nacnaca Degmada Wadajir.